Andron’ny manamboninahitra: notolorana gisa ny praiminisitra | NewsMada
Andron’ny manamboninahitra: notolorana gisa ny praiminisitra
Nanome voninahitra ny andron’ny manamboninahitra ny Praiminisitra Ntsay Christian: Nanomboka tamin’ny fibaikoana ny fampiakarana ny sainam-pirenena ny hetsika ary narahina fanolorana gisa ho an’ny praiminisitra sy ireo lehiben’ny manamboninahitra. Fomba fanao, amin’ ny fotoana tahaka izao, izany. Nitarika ny fotoana ny manamboninahitra zandriny indrindra, ny lietna Rafenohasina Onintsoa Noro.
Nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Chrstian fa anisan’ny antony nahavitana ny fifidianana ny hafanam-po nisy teo amin’izy ireo, ary reharehan’ny firenena ny fananana ny tafika. Nohazavainy ihany koa fa olom-pirenena mitovy amin’ny Malagasy rehetra ihany izy ireo, ka samy manana ny safidiny manokana, saingy manao ho vaindohan-draharaha ny tombontsoan’ny firenena izy ireo.
Fotoana iray nahafahan’ireo manamboninahitra zandriny indrindra nivoaka tamin’ny sekolin’ny manamboninahitra ao Antsirabe, nitarika ny fibaikoana ireo zokiny, ny asabotsy teo.
Tsiahivina fa ankalazaina isaky ny 12 janoary ny andron’ny manamboninahitra, noho ny fitakiana nataon’ireo andiany voalohany tamin’ny mpianatra tao amin’ny sekoly ambony ny Akademia miaramila ao Antsirabe izany, nangataka ny hanatsaràna ny fiainan’izy ireo.